Baaq Ku Socda Qurba Jooga Reer Awdal « HiilDan.Com
Home › Warqad Furan (Open Letter) › Baaq Ku Socda Qurba Jooga Reer Awdal
Baaq Ku Socda Qurba Jooga Reer Awdal By hiildan on January 10, 2009	• ( 0 )
KU: QURBA JOOGA AWDAL
OG: XUKUMADDA SOMALILAND
OG: GURI JOOGA AWDAL
UJ: AYNU DIWAAN GALINO DADKEENA
Anigoo ah Suldaan HiilDanYare, kadib markii an kulamo dhawr ah iyo wada xaajood qaatay muddo dheer an la yeeshay naftayda iyo garaadkayga iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jidhkaygu ka kooban yahay, gaar ahaan qaybaha wali jooga qurbaha. Waxaynu go’aansannay inaynu ugu baaqno qurba jooga reer Awdal inay ina soo dareershaan oo aynu dadkeena innagu ku diwaan galino gacanteena. Waxa loo baahanyahay inaynu Gacana ku galno doorashada, gacana ku wadno diwaan galinta. Hadaba si taasi innoogu suurtoowda waxa laynaga rabaa inaynu fulino qodobadan soo socda: 1. In qof kasta oo reer Awdal oo qaangaadh ah oo qurbaha ku nooli soo xamaan qaato, oo aynu soo urusano qalab iyo qaadhaan waxkasta oo ay qaadan karto in dadkeena lagu diwaan galiyo.
2. Inaynu si xilkasnimo leh u gudano waajibaadkeena inaga saaran inaynu dadkeena diwaan galino,inaguna is diwaan galino, oo waliba tira koobno, innagoo isku duuban. Waa inaynu tirsano xitaa ilmaha uurka kuk jira iyo kuwa ku jiri doona, kuwa soo dhashay iyo kuwa soo dhalan doona. 3. In inta aynu gudanayno waajibaadkeena diwaan galinta, aynu geed qudhaanjo leh iyo garoonka biroole ku xidhno dhammaan siyaasiyiinta guri jooga gobolka Awdal. Oo aynu ku xukunno jawaan qaad ah maalin kasta midkiiba, oo ay quraac iyo qado iyo cashaba ka dhigtaan, iyo foosto shaah madow ah midkiiba dhamo/cabbo. Cunto kale iyo cabitaan kale waa inaynu u ogolaanin.
4. In marka aynu Awdal tegno ee dadka diwaan galino, kadibna aynu Baasabooradeena (Passports), u soo dhiibno dhalinyarada reer Awdal, oo iyagu qurbaha innoo soo weydaartaan. Dhibaatadu waxay ka taagan tahay dhalinyaradii gobolka joogtay oo indhahoodu soo eegayaan uun qurbe, iyo dhalinyaradii qurbaha ku noolayd oo indhahoodu eegayaan uun Awdal. Dee inagiibaaba isku mashquulnaye aynu is weydaarano, oo kooxiba dhankeeda ha usoo yeelato khibrad. Dhawrkii sanadoodba mar aynu sidaas isku weydaarano. 5. In marka aynu soo gaba-gabayno waajibaadkeena diwaan galineed ee heer gobol, aynu dabadeed u gudbino xukumadda dalka ee heer Qaran. Isla mar ahaantaana aynu si heer Qaran ah u baahinno natiijada kama danbaynta ah ee iska diwaan galiyay gobolka Awdal.
Suldaan HiilDanYare Suldaan Awdal
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Xuquuqda Diwaan Galinta Uur Ku Jirka Somaliland: SHEEKOArrin Murugsan: Diwaan Galinta »Categories: Warqad Furan (Open Letter)	Related Articles